Ity no fomba hahalalana raha tena marina ny sushi-ahidrano-NANTONG CHITSURU FOODS CO., LTD.
Ity no fomba hahalalana raha tena vao haingana ny sushi anao
Fotoana: 2018-10-07 Hits: 120
Raha ny amin'ny zavatra tsy afaka iainantsika tsy misy, sushi matsiro tokoa no hita eo. Matotra, raha miankina amintsika izany, dia hanoritsoritra sary hosodoko sy sary sokitra isika 24/7 satria tena misy ny fitiavantsika. Ary mino izahay fa maro aminareo no mankasitraka sushi tsara koa. Fa inona no atao hoe "sushi tsara", ary ahoana no ahafantaranao raha madio ny sushi？
Nanjary safidy haingana ho an'ny sakafo Sushi, avy amin'ny tempura sy teriyaki ka hatramin'ny sashimi, nigiri, ary ireo lovia nentim-paharazana sarotra kokoa. Ary eny, lasa ihany koa ny sushi. Na izany aza, rehefa mividy trondro manta sy vary mangatsiaka ianao matetika izay hita matetika ao anaty boaty efa nomanina, dia mety hisalasala sy ho haingana ny raharaha.
Fantatray fa tsy azo atao ny misoroka tanteraka ny trondro subpar, saingy misy zavatra vitsivitsy azonao zahana mba hahitana raha matsiro indrindra ny sakafonao sushi.
1. Ny fofona
Fomba iray tsara hilazana raha madio ny sushio dia ny fofona. Toy ny ao, ny trondro vaovao dia tsy tokony hisy fofona mihitsy, ary tsy tokony ho ny trano fisakafoanana ihany koa. Ny fivarotana madio sy tsy misy fofona dia famantarana tsara foana fa miahiahy momba ny fiarovana sy ny kalitaon'ny sakafo ny mpiasa. Fa raha tsy maintsy misy fofona, dia nilaza i Chefeka malaza malaza manerantany Hidekazu Tojo fa, "ny trano fisakafoanana sushi tsara dia tokony hitovy amin'ny kôkômbra na watermelon."
2. Ny fijery
Makà segondra iray hijerena ny nofon'ireo trondro. Tokony ho mamirapiratra, tsy mety mamirapiratra ary tsy misy fotaka milky izy io. Trondro manjavozavo, manjelanjelatra no famantarana lehibe namonoana ny sushi anao. Ny fahadiovan'ny vary sy ny fofon'ny nori (ahidrano) dia mety hanondro ny fihavaozana ihany koa.
Raha ny resaka tuna dia nilaza i Trevor Corson, manam-pahaizana momba ny sushi, fa mety mamitaka ny endrika, satria fanao mahazatra eo amin'ny sehatry ny indostria ny gazy gazy miaraka amin'ny gazy karbonika mba hahatonga azy ho mavokely. Midika izany fa ny mavokely dia tsy fampisehoana ny freshness. Raha toa mivadika volontsôkôlà ny sisiny dia azonao atao ny misafidy ilay horonana legioma.
3. Ny fahatsapana
Ny nofon'ny trondro vaovao dia tokony ho mafy orina mba hiverenany indray rehefa tsindriana. Aza hadino ny manamarina raha hahatratra ireo mason-tsivana ireo ny sushi anao alohan'ny handaniana azy.
4. Ny tsiro
Inona no tsirony? Raha tsy nandalo ny fofona ny sushi anao, dia jereo, ary mahatsapa fitsapana… tsy misy mihitsy fomba tokony hanandramanao azy. Raha tsy fanapoizinana ara-tsakafo no misy anao.
Ankoatr'izay, raha efa voafonosina ny sushi anao dia alao antoka fa hanamarina ireo daty lany daty ianao ary aza matahotra ny manontany ny mpiasa amin'ny ora tena nanomanana ny sakafonao
Torohevitra vitsivitsy hafa hahazoana antoka fa ny zavatra niainanao sushi no zavatra tsara indrindra azonao hatrizay:
Makà tolo-kevitra! Ny vavan'ny vava na ny tranokala toa ny Yelp dia mety ho tsara amin'ny fanesorana ireo trano fisakafoanana malemy kokoa ary hitazona anao tsy handany fotoana sy hery. Ary koa, manam-pahaizana sushi maro no manome sosokevitra ny hitsipahana ny alahady satria ny trano fisakafoanana japoney dia tsy matetika no trondro vaovao aterina amin'ny faran'ny herinandro. Ny trano fisakafoanana sushi kalitao koa matetika dia mikatona isaky ny alatsinainy.
Raha azonao atao, dia tokony hialanao ny sushi rehetra azonao atao. Na dia mety halaim-panahy aza ny "fifanarahana" dia mety hanenina ianao amin'ny farany. Sushi dia heverina fa vita amina akora avo lenta, noho izany ny tsy fisian'ny fahasalamana dia mety ho antony ahazoanao vola be amin'ny vola 10 fotsiny.
Ary izany no ahafahanao mamantatra raha tena vao haingana ny sushi anao. Aza hadino ny mandefa tsipika anay raha mahita toerana sushi tsara mendrika zahana ianao.
Taloha: Tombontsoa ara-pahasalamana amin'ny ahidrano roasted
Next: Fomba mora hanampiana karazan-tsakafo ahiana ho sakafonao